c++ သင်ချင်လို့ပါ — MYSTERY ZILLION
May 2010 edited April 2011 in C++
ကျွန်တော်c++ သင်ချင်လို့ပါ။ လမ်းညွန်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ
firephoneix wrote: »
အစ်ကို C++ ကို သင်ချင်တယ်ဆိုရင် link က ဒီမှာပါ။ www.cprogramming.com ဒါကတော့ english လိုပဲသင်တာပါ။ မြန်မာလိုလေ့လာချင်ရင်တော့ ဆရာ ဦးအောင်မြင့် ရဲ့ C++ vol1. vol2 စာအုပ်၀ယ်ဖတ်ပါခင်ဗျာ။ Mysterzillion ရဲ့ edu ပိုင်းမှာတော့ မြန်မာလိုပါ။ ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါ။ http://edu.mysteryzillion.org/c ဒီလိုအကြံပြုတာ ကျွန်တော်လဲ အခု C++ ကို လေ့လာနေလို့ပါ။ အသုံး၀င်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Thankalot for godspeedmav
C++ ထက် C#.net ကို လေ့လာသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်
YOTTAMYO wrote: »
C++ ကို စလေ့လာတာကောင်းပါတယ်။ C++ နည်းနည်းပါးပါး လေ့လာပြီးမှ C# ပြောင်းတာ ကိစ္စမရှိဘူး။ C# လေ့လာပြီး C++ ပြောင်းသုံးရင်အဆင်မပြေလှဘူး။ နောက်ပြီး C++ လေ့လာထားရင် iPhone SDK objective c မှာ တော်တော်အသုံးဝင်တယ်။
အခြေခံကိုပိုင်နိုင်ချင်ရင် အစအဆုံးရှင်းပြတဲ့ english စာအုပ်ကိုဖတ်...နားမလည်လည်းဆက်ဖတ်...ကွန်ပြူတာကိုပိတ်ထား...စာအုပ်နဲ့ဘောပင်မှာ code ကိုလိုက်ရေး.... မျက်စိနဲ့ dry run လုပ်...
ဖတ်ရုံမဖတ်နဲ့ syntax ကိုကျက်.... code ကိုမကျက်နဲ့.... syntax ကိုကျက်ရင် ၅မိနစ်ပဲကြာတယ်... မကျက်ရင် ၁လလောက်နေမှ အလွတ်ရေးနိုင်လိမ့်မယ်... Coding power က တစ်ချိန်မှာ လေ့လာစရာကုန်သလောက်ရှိသွားနိုင်တယ်... programmer တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကွာတာက စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းပဲ...
အထင်ကြီးခံချင်ရင်တော့ သူများ code ကို ဖောက်စွပ်လုပ်...
(၁) C++ ကို ပထမဆုံးသင်တာကို လုံး၀မထောက်ခံပါဘူး။ ဂျပန် IT exam တွေမှာတောင် C++ နဲ့ မေးခွန်းထုတ်လေ့ မရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ C++ ကို လေ့လာတဲ့အခါ ဆရာကောင်းမတွေ့ခဲ့ရင် programming ကိုကြောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
(၂) အကြံပေးလိုတာကတော့ C ကို အရင်လေ့လာသင့်ပါတယ်။ C ကို ဒီနေ့ခေတ်မှာ အသုံးမပြုတော့ဘူးလို့ programmer တော်တော်များများက ထင်နေပေမယ့် MS-Windows SP3 ရဲ့ Win32API အားလုံးကို C နဲ့ ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
(၃) C ကို ဆရာမကူဘဲ လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ ဦးအောင်မြင့်ရဲ့ C စာအုပ်ကို အရင်ဖတ်ပြီးလေ့လာပါ။ တကယ်လို့ ဆရာနဲ့လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ Beginning C: Novice to Professional စာအုပ်ကိုဖတ်ပါ။ သင့် IQ ပေါ်မူတည်ပြီး အများဆုံး ၂၁ရက်ကြာပါမယ််။
(၄) C ကို တတ်ကျွမ်းသွားရင် C++ ကိုဆက်လက်လေ့လာပါ။ အကြမ်းဖျင်းသိသွားရင် ရပါပြီ။ ဒီအတွက် ၁၄ရက်ကြာပါမယ်။
(၅) C++ ကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင် Visual C++ 10 ကိုလေ့လာပါ။ VC ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် VC with MFC ကိုပဲလေ့လာပါ။ VC with CLI (Visual C++.net) ကိုမလေ့လာပါနဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ VB.net၊ C#.net အပါအ၀င် .net ဘာသာစကားတွေအားလုံးဟာ Virtual Machine ကိုအခြေခံထားတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာက professional တွေ ၉၀%နီးပါးပါး လက်ရှောင်ပါတယ်။ Adobe၊ Kaspersky 2011၊ OFfice 2010၊ Windows7တို့ဟာ VC++ 8/9 တို့နဲ့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
(၆) တကယ်လို့ VC ကိုမလေ့လာချင်ဘူးဆိုရင် အလေ့လာသင့်ဆုံးကတော့ Borland Delphi ပါပဲ။
(၇) မြန်မာပရိုဂရမ်မာတော်တော်များများက VB၊ .net Language နဲ့ Java အရေးများကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ သူတို့ရဲ ပရိုဂရမ်တော်တော်များများဟာ security ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ (မျိုးမြင့်ထိုက်ရေးသားသော Cracker လမ်းညွှန်မှာ အသေးစိတ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။)
(၈) မြန်မာတော်တော်များများဟာ ကိုယ်လုပ်တာ မှားခဲ့ရင်တောင် အမှားပြင်နိုင်ခဲတာမို့ (Programming Language တစ်ခုတည်းသာ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရေးကြတာကို ဆိုလိုပါတယ်။) ညီလေးအနေနဲ့ အရွေးမမှားရအောင် ရှင်းပြလို်က်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
rhythm(Myanmar Cracking Team)
Cracker လမ်းညွှန် 2.1
Cracker လမ်းညွှန် 2.0
I don't think so. u and me may be different point of view . I do think C++ should learn first forastudent. why ??? The reason is C++ is semi-OOP . Nowaday , most of the programming language become OOP . C is not OOP and C++ is semi-OOP. but newbie shouldn't learn pure OOP like java bcoz foranewbie , he or she couldn't live with object all the time .
Programming ကို ဘယ်လို လေ့လာရမယ်ဆိုတာ အကြံပြုထားတဲ့ site အချို့ပါ။
Program ကို ဘာအတွက် ရေးမှာလဲ (ဥပမာ - မိမိစာတမ်းအပေါ်အထောက်အကူပြုရုံသက်သက်လား)၊ မိမိက programming မှာ ဘယ်လောက်စိတ်နှစ်ထားနိုင်သလဲ (ဥပမာ - မိမိအသက်မွေး၀မ်းကျောင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ခဲ့သော်)ဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီး programming language ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ Programming ကို အင်တာနက်ကနေ လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ www.functionx.com က အကောင်းဆုံးလို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ Offline လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Teleport Pro နဲ့ download လုပ်ပါ။ ပြီးရင် index.html ကို Fly Help နဲ့ compile လုပ်ပြီး chm ဖိုင်ထုတ်ပါ။ ဒါဆို web site တစ်ခုလုံးကို chm ဖိုင်တစ်ခုတည်းနဲ့ ဖတ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ www.codeproject.com ကတော့ professional programmer တွေအတွက် ပိုသင့်တော်ပါတယ်။
if you don't haveatime but you need to write some program, learn python. Python is very easy to learn. You can learn yourself. Books and Internet will guide you.
If you haveatime and want to learn programming , learn C++ or C. It's great basic but you need good guide. You can't learn yourself well.
If you want to do your master project in UCS , learn C# or java. Because UCS may accept only this two ( VB is not allow in UCSY )
If you want to do your own web application quickly , learn PHP. PHP is easy to learn and quickly develop.
If you want to develop strong web application , learn Ruby on Rails. ROR is great for web application development.
If you have basic C or C++ and you still not understand OOP , learn java and Ruby.
If you are plan to work in Myanmar , learn ASP.NET and C#.
Yep Although i don't like java ,it make me understand abt OOP. I totally agree that point
how abt in other country ???
အစ်ကိုရေ ကျနော်ကို offline download ဆွဲနည်းလေးကို ဥပမာ တစ်ခုပြပြီး ဆွဲပြပေးပါလား ကျနော် မဆွဲတတ်တော့လို့ပါ
base on country. For sg , .NET , PHP , Java are popular for job. If you are awesome in Java , you can get job easily. ROR and Python jobs are also available in sg. The main reason to get job in SG, you must be awesome.
.NET and PHP may not need too much superb but java , ror, python are need it.
Before I discuss what C++ likes, I'd like to spend reasonable time on basic aspects of programming languages. There are5kinds of programming languages: Machine language, Assembly Language, low-level language, high level language and fourth generation language. C++ isakind of low level language (Not really). C++ is based on C with better OOP environment. We sometime call C++ as "better C". In general speaking, high-level language is created based on low-level language.
There are two types of C++ language standard:
The ISO/IEC C++ standard (unmanaged C++) (native C++)
The C++/CLI standard (managed C++)
C++/CLI is an extension of native C++ with implementation of .Net Framework. The idea behind C++/CLI is to add features to native C++ that allow you to develop applications that target the virtual machine (Common Language Runtime, CLR) environment supported by .Net framework. If you want to learn C++, it is the best bet to start from native C++. Please do not get sick with GUI unless you are really proficient in basic theory of C++.
It is my apology not to have enough time to discuss more. If I get time, I will pop here out again. By the way, do not want to beaproficient programmer with just overnight reading. Cheer!
Not necessarily. It depends on what you are going to program. Every programming language has pros and cons. If we want to beareal programmer, we should not just follow the easier language. It is ok to start with C++. But you should have some programming set of minds. Perl and Python are mainly used for teaching purposes currently. If you don't have any programming experience before, one of them will be the best bet to start. However, it depends on person, though. AS A REAL PROGRAMMER, PROGRAMMING LANGUAGE IS NOTHING. (I know that sounds weird, but it is )
syntax ကိုကျက်.... code ကိုမကျက်နဲ့.... syntax ကိုကျက်ရင် ၅မိနစ်ပဲကြာတယ်... မကျက်ရင် ၁လလောက်နေမှ အလွတ်ရေးနိုင်လိမ့်မယ်... Coding power က တစ်ချိန်မှာ လေ့လာစရာကုန်သလောက်ရှိသွားနိုင်တယ်...
Personally, I strongly suggest not to learn by heart. Believe it or not, you will never beaproficient programmer.
To beareal programmer, it takes many years of experience. (I don't mean writingavery simple program with funny GUI) :P
Personally, there is no semi OOP. C++ fully support OOP and it has more detail language structure. There is not such kind of thing like learn OOP from this language and learn these from that language. But, Java is ok to start. Generally, Java is the first year university course in most universities.
Sorry! အနည်းဆုံး ၂၁ရက်ကြာမယ်လို့ ပြောချင်တာပါ။
C++ ကို အကြာကြီးမလေ့လာခိုင်းတာက C++ က လက်ရှိမှာ လုံး၀မသုံးတော့လို့ပါ။ C++ ကိုလုပ်မယ့်အစား Visual C++ ကိုလေ့လာတာ ပိုအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ Visual C++ မှာတောင် မျိုးကွဲတွေက အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ Visual C++ က အခြား language (C, C++ အပါအ၀င်) တွေထက် ဘာတွေ အားသာချက်ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ cracking (Reverse Engineering) ကိုလေ့လာတဲ့အခါ သိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခါ Java၊VB၊ Dot.net programming တွေကို စိတ်ကုန်သွားပါလိမ့်မယ်။
C++ က လက်ရှိမှာ လုံး၀မသုံးတော့လို့ပါ။
C++ is top number3... it is still use in many industry .. Yes ... windows application development and web development is very rare but still use in Linux ... and iphone dev..
Do you know ... Box2D ? It's physic engine and written by C++ ... It's very popular physic engine in the world and most of the games are written by C++.
Do you know Keymagic ? it's written by C++.
ကျေးဇူးပါ ဇင် လဲ အဲဒီ C++ကို သင်နေတာကြာပြီ အခုရေးနေတောလဲအဲဒါနဲ့့ပဲဆိုတော့ တော်တော်တော့အဆင်ပြေပါတယ်လွယ်လဲလွယ်တယ်လေ looping တွေကလွဲလို့ပေါ့
Engine တွေနဲ့ kernel mode driver တွေကိုတော့ C++ နဲ့ရေးနေကြတုန်းပါပဲ။ Industrial တွေမှာသုံးနေတဲ့ Machine ပရိုဂရမ်တွေကိုလဲ C နဲ့ ရေးနေကြတုန်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Keymagic ကိုတော့ C++ နဲ့ရေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ Visual C++ 10.0 နဲ့ပါ။
PEiD က Visual C++ 10 ကို detect မလုပ်နိုင်ပေမယ့် Linker version ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Visual C++ 10.0 နဲ့ရေးထားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
VC++ ဆိုတာ Built in Library တွေပါတဲ့ IDE တစ်ခုပါပဲ။ yahoo answer မှာတော့ ဒီလိုဖြေထားတာတွေ ့ရပါတယ်။ တခြား QT ဆိုတဲ့ UI framework ကိုသုံးပြီးလည်းရေးလို ့ရပါတယ်။
မကွာဘူးဆိုတာ အောက်ကပိုစ်မှာ ကိုလူပျိုဖြေထားတာလည်းရှိပါတယ်။
ဒါကတော့ stackoverflow ရဲ့အဖြေပါ။
rhythm wrote: »
For my point of view,
C++ and Visual C++ is the same language ... same syntax ... same function .... yes ... it's different, Visual C++ is IDE and it include other built in library for Windows .. It's also C++ ....
C++ မှာလက်ရှိသုံးနေတာက 98 Standard ဟာအဓိကကျပါတယ် နောက်ပိုင်းလည်း နည်းနည်းထပ်ဖြည့်တယ် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ C++0x နဲ့အစားထိုးဖို့တော့ရှိတယ် ဒါပေမယ့် အပြီးမသတ်သေးပါဘူး။ Standard မှာ Core Language နဲ့ Library ဆိုပြီး ၂ ပိုင်းပါပါတယ်။ Core Language မှာက Language grammar နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ Specification တွေပါတယ် Standard Library မှာလည်း C++ မှာ Build In ပါမယ့် Library တွေရဲ့ Specification တွေပါပါတယ်။ အဲဒီတော့ C++ လို့ပြောရင် အဲဒီ့ Standard တွေကို အားလုံးလိုက်နာရပါတယ် မလိုက်နာရင် C++ လို့မခေါ်ရပါဘူး။ အဲဒီတော့ သူ့မှာပါတဲ့ Standard Library တွေက လုပ်မပေးနိုင်တာတွေရှိတယ် အဲဒါတွေကို ထပ်ဖြည့်ထားတဲ့ Library တွေရှိမယ် အဲဒါတွေအပေါ်မူတည်ပြီးပဲ ကွဲပြားနေတာပါ။ Visual C++, Borland C++, VisualAge C++ စသည်ဖြင့် Commercial Compiler အများကြီးရှိပါတယ် အားလုံးဟာ C++ ပါပဲ ကွာခြားတာက Library တွေပါ။ အလကားရတဲ့ Compiler တွေကရောဆိုတော့ သူတို့လည်း Library တွေလိုတာပါပဲ အရာအားလုံး ကိုယ်တိုင်မရေးနိုင်ပါဘူး Commercial တွေလို အဆင်သင့်ပါမလာရင် ကိုယ်တိုင်ပဲ Library တွေကို Compile လုပ်ယူ Install လုပ်ယူရတာပါပဲ။ ကျီးကန်းတိုင်းတော့မဲတာပေါ့ ဒါပေမယ့် မဲတိုင်းကျီးကန်းတော့မဟုတ်ဘူး။ Visual C++ က C++ လားဆိုရင် ဟုတ်တယ်ပြောလို့ရတယ် ဒါပေမယ့် C++ က Visual C++ လားမေးရင်တော့ ဟုတ်တယ်လို့ တရားသေတော့ ပြောလို့မရဘူးပေါ့။
<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">C++ ကိုလုပ်မယ့်အစား Visual C++ ကိုလေ့လာတာ ပိုအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ Visual
C++ မှာတောင် မျိုးကွဲတွေက အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ Visual C++ က အခြား
language (C, C++ အပါအ၀င်) တွေထက် ဘာတွေ အားသာချက်ရှိတယ်ဆိုတာကတော့
cracking (Reverse Engineering) ကိုလေ့လာတဲ့အခါ သိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခါ
Java၊VB၊ Dot.net programming တွေကို စိတ်ကုန်သွားပါလိမ့်မယ်။</span><br style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><br>No offense In many cases, native C++ is better than C++/CLI. First of all, C++/CLI is platform dependent(in some exceptional cases) As I discussed before, VB C++ (C++/CLI) isakind of extension of native C++. The main difference is memory management. In C++/CLI, the memory is managed by garbage collector. There is only reference in C++/CLI, no pointers. Native C++ also is faster. Warcraft III, mozilla firefox, etc are written in native C++. Almost every program is written in C++ currently bro! C++/CLI is personallyakind of cumbersome!<br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">ဒီအခါ
Java၊VB၊ Dot.net programming တွေကို စိတ်ကုန်သွားပါလိမ့်မယ်။<br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Visual C++ is implemented with .Net framework bro!</span><br></span>
C#net နဲ့ C++ သင်ချင်လို့ပါ
Edited by CalmHill
စာဖတ်ပါ ပြီးတော့ရေးကြည့် Run ကြည့် ဖတ်ရင်းနဲ့နားမလည်တာတို့ Run ကြည့်လို့ မရှင်းတတ်တော့တဲ့ Error တွေတွေ့လာရင်လာမေးပေါ့ အဲဒီလိုမေးခွန်းမျိုးဆိုရင် မအားရင်တောင် အချိန်ရအောင်ရှာပြီးဖြေပေးပါတယ်။ ဘယ်စာအုပ်တွေ လက်ရှိဖတ်နေသလဲ ပြန်ပြောပေးရင် သင့်တော်မသင့်တော် ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ ပြန်ပြောပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
IT NOT TOO LATE TO LEARN FOR US,TI'S TRUE?
please learn me c
programmer တစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်ရင် ဘယ်ကစပြီးလေ့လာရမလဲသိခြင်ပါတယ်